पिसाब गर्न बाथरुम जादा पल्लो घरको झ्यालमा आँखा पर्दा - Nepali Sex Tube
दिउसो त मैले उनिलाई पटक पटक देखेकै हो । पल्लो घरको झ्यालमा मेरा आँखा पर्दा उनिलाई अक्सर देख्नेनै गर्थे । हसिलो मुहारले मेरा नयनहरुको स्वागत गर्थिन उनी पनि । मपनी कुनै दिन उनिलाई झ्यालमा देखिन भने मेरा पुरै दिनहरु निकैनै खल्लो हुन पुग्थियो । मनमा कताकताकाउकुती लाग्थियो उन्का र मेरा नयन जुद्दा । मेरा चाहना र मेरो मनले उन्लाई कहिले अङालोमा कस्न पाउने हो भनी मेरो दिमाग खेलाउन थालेका थिए ।एक रात म कोठामा एक्लै हुस्की पिएर बसेको थिए । पिसाब गर्न बाथरुम जादा पल्लो घरको झ्यालमा आँखा पर्दा त उनी लाई देख्न पुगे । उन्का र मेरा आँखा जुद्दा उनी लजाएर बत्ती निभाउन थालिन् ।
म पनि पिसाबगर्न लागे । पिसाब गर्दा त मेरो लाडो टनक्क ठन्की रहेको थियो र रुमाल बाहिरबाटनै प्रस्टदेखिन्थियो । शायद मेरो यै अवस्था देखेर होला उन्ले लजाएकी । बाथरुमबाट फर्केर आउँदामैले त्यो झ्यालमा हेर्दात उनी बत्ती निभाएरमेरै कोठा तिर हेरी राखेकी रहिछन । मैले उन्लाई नदेखेको जस्तै गरी हुस्की घ्वाट्ट पारी बेरेको रुमाल फुकालेर आफ्नो लाडो मुसार्न थाले । एसो नजर लुकाएर उन्लाई हेर्दात उनी पनि मस्त सँगमेरो चर्तिकाला हेरी राखेकी रहिछन ।
उन्लाई देखाउदै मैले मेरो लाडो मस्त सँग छोल्न थाले । मेरो कोठाकोबत्तिको उज्यालोले त उनी पनि निकैनै सेक्सी देखिएकी थीईन । मलाई निकैनै इमोसन आउन थालेको थियो अनी मैले ईशाराले म आउँ भने । उनी त फरक्क फर्केर झ्याल थुनी बत्ती बाल्नथालिन । आज जे होस् म नचिकी छोड्दिन भन्दै कोठा बन्दगरी पर्खाल नाघेरउन्को झ्यालमा टक्टक गर्न थाले । बिस्तारै झ्याल खोली मलाई भित्र आउनईशारा गरिन । मैले उन्लाई यती नगिजबाट देखेको पहिलो पल्ट । मध्यम कद, गोरो रुप , हसिलो मुहार अनी ……….. बयान नै गर्न सक्दिन । शायदभन्नु पर्दा अप्सराको रुप भने हुन्छ ।ग्वाम्म अङालोमा कसेर चुम्न थाले मैले । प्रतिकार उन्ले पनि गरिनन मात्र मलाई पनि बेस्सरी च्याप्न थालिन् ।
कानको लोती चुम्न थाले मैले। बिस्तार उन्को फिला मुसार्न थाले मैले अनी उनी पनि के कमकी थीईन र कपडा बाहिरै बाट मेरो लाँडो मुसार्न थालिन ।थालिन । मैले उन्को म्याक्सिलाई ल्वात्त तलबाट उचाली उन्लाई नाङो बनाए । मस्त मस्त दुधका दुबै पोका हरु ज्वाला मुखी बनेर ब्रा बाहिर आउन खोजी रहेका थिए। प्वाक्क उठेको उन्को माल पेन्टी भित्रनै रोइ रहेको जस्तो लाग्थियो । ब्रालाईमैले उन्को छातीबाट हटाएर गुलाबी ति मुन्टा चुस्दै र खेलाउदै थिए ।
“उम्म्मा अस्स्स्स्सा ” गर्दै उनी आफ्नो हातले मेरो लाडो मुसार्न थालिन । मेरो लाडो सहन नसक्ने भै सकेको थियो । मैले उन्को पेन्टी बाहिर बाटनै उन्को पुतिमा लाडो रगड्न थाले । अब त उनी लाई नि अती भएछ। आफ्नो पेन्टी पंछाएर मेरो लाडो समाती ल्वाम्म आफ्नो पुतीमा छिराइन । “उफ्फ्फ्फा स्स्स्स्स्स्स्सआहहहह” मैले धक्का मार्न थाले कारीब पच्चिस मिनेट धक्कामारी सके पछी उन्ले पानी फाल्न थालिन् । ” को को बस्छ यहाँ तिमी सँग ? अनी तिम्रो बिहेत भाईसकेको जस्तो छ नि ?” भन्दै मैले एक छिन् सुस्ताउदै उन्लाई सोध्न थाले । उनी पनि मेरो लाडोमुसार्दै ” मेरो बिहे भाको छैन म यहाँ कामगर्न बसेकी हुँ । यहाँ मेरो दिदी र उहाको श्रीमान अनी म गरी तीन जना बस्छौ ।
अहिले पाँच छ दिनको लागि दिदी उहाको माइती जानु भाको छ। ” भन्नथालिन । “तपाइले किन मेरो बिहे भईसक्यो ? भनेर सोधेको नि ?” भनी सोधिन मलाई । ” तिमी सँग चिक्ने अनुभबले गर्दा मैलेसोधेको । ” ” मेरी मालिक्नी म उहालै दिदी भन्छु । उहाको श्रीमान धेरै जसो बाहिर जानु हुन्छ प्रोजेक्टको कामले । मलाई एस्तो कुरामा दिदिले अनुभबी बनाइदिएको हो ।कुनै दिन म सबै कुरा बताउला । ” ठिकै छ भन्दै मैले उन्को पुती चाट्नथाले उन्को माल चाट्दा चाट्दै उन्लाई फेरी पनि झारिदिए। त्यो रात निकै नै चिकियो ………….. लत अब म जान्छु अर्को दिन तिम्रो सबै कुरा सुनम्ला भन्दै म आफ्नो कोठामा गै सुते ।